Asa tsy andoavam-bola: Espaina no tsara indrindra ary Etazonia no ratsy indrindra | Raharaham-panjakana
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Asa tsy andoavam-bola: Espaina no tsara indrindra ary Etazonia no ratsy indrindra
Ny firenena sasany manolotra fonosana fialan-tsasatra malala-tanana, fa ny sasany kosa tsy manome na inona na inona
Ny mpampiasa amerikanina dia tsy adidintsika ny manome karazana fialan-tsasatra karama
Ny mpiasa any Eropa dia afaka manantena fialantsasatra karama iray volana farafahakeliny farafahakeliny
Firenena eropeana maro koa no manolotra fialantsasatra be karama ampaham-bola be dia be
Ny mpiasa amerikana dia mahazo fotoana kely karama noho ny firenena hafa raha ny fikarohana natao.
Ekipa manam-pahaizana momba ny fiainana iraisam-pirenena no nijery ny fotoana tsy ampoizin'ny mpiasa manerantany.
Ny habetsaky ny karama fialan-tsasatra dia miovaova be isaky ny firenena noho ny lalàna samihafa eran'izao tontolo izao misy firenena sasany manolotra fonosana fialan-tsasatra malala-tanana, fa ny hafa kosa tsy manome na inona na inona mihitsy.
Ny mpampiasa amerikanina dia tsy adidiny ny manome karazana fialan-tsasatra karama, raha ny mpiasa any Eropa kosa dia afaka manantena farafahakeliny karama iray volana farafahakeliny isan-taona.
Mendrika miala sasatra ny rehetra, indrindra amin'ity toetrandro ity, fa ny firenena sasany dia mahazo mihoatra ny hafa. Ny fananana fitsaharana miala sasatra dia afaka manao zava-mahatalanjona amin'ny famokarana sy ny famoronana ary ny famahana olana.
Ny haavon'ny fialan-tsasatry ny lalàna dia miovaova be manerantany noho ny lalàna samihafa sy ny lalàna eo an-toerana. Tsara ihany koa ny mampatsiahy fa ny orinasa samihafa dia manome tolotra fialan-tsasatra samihafa ho an'ny mpiasany fa tsy fialantsasatra ampahibemaso.
Ireo mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana dia mahazo tombony amin'ny Toro-lalana miasa, midika izany fa mahazo antoka 20 andro farafahakeliny izy ireo asa raha karamaina isan-taona. Firenena eoropeanina maro ihany koa no manolotra fialantsasatra be karama ampaham-bola be, izay midika fa afaka miakatra hatramin'ny roa herinandro ny mpiasa.